Tag Archive for "उत्तर कोरिया" - उत्तर कोरियाको भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता
उत्तर कोरियाको भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ उत्तर कोरियाको औपचारिक भ्रमण सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् । चिनियाँँ समाचार समिति सिन्ह्वाले उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङबाट यो समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । चिनियाँँ राष्ट्र प्रमुखबाट १४ वर्षपछि यो पहिलो पटक उत्तर कोरियाको भ्रमण भएको पनि उक्त समाचारमा जनाइएको छ । राष्ट्रपति सी चीनको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि ... थप पढ्नुहोस्
आजदेखि बजारमा बदलिएको मोड !
काठमाडौं । उत्तर कोरियाको नेता किम जोंग उनले कोरिया मज़दूर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा काम सुरु गर्नु भएको ५५ औ बर्षको उपलक्ष्यमा ऊनको योगदान स्मरण गर्दै बदलिएको मोड पुस्तक आज देखि बजारमा आएको छ । उत्तर कोरिया राजदुत जो योंग मान पुर्व श्रम तथा यातायत मन्त्री कमल चौलागाई , साहित्यकार डक्टर जीवेन्द्र देव गिरी , साहित्यकार सुलोचना मानन्धर , लेखक जमुना खत्री पुस्तकका सम्पादक विवश बस्ति प्रकाशन संस्था... थप पढ्नुहोस्
चीनमा उत्तर कोरियाका हजारौं महिला देह व्यापारमा !
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका हजारौं महिला तथा युवती चीनमा देह व्यापारमा संलग्न गराइने गरेको खुलासा भएको छ । बेलायतस्थित ‘कोरिया फ्युचर इनिसिएटिभ’ले उत्तर कोरियाका महिला तथा बालिकालाई चीनमा जबरजस्ती देहव्यापारमा लगाउनका लागि बिक्री गरिँदै आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा चिनियाँ पुरुषले विवाह गरेर उत्तर कोरियाली युवतीलाई ल्याउने र जबरजस्ती देहव्यापारमा संलग्न गराउने गरिएको उल्लेख छ । ... थप पढ्नुहोस्
नाकाबन्दी र खडेरीका कारण उत्तर कोरियाको जनजीवन प्रभावित
काठमाडौं । नाकाबन्दी र खडेरीका कारण उत्तर कोरियाको जनजीवन प्रभावितमा यस शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो खडेरी परेको छ । यसबाट त्यहाँको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार यस खडेरीका कारण यस शताब्दीकै सबैभन्दा बढी त्यहाँका नागरिक प्रभावित भएको भन्दै यसप्रति विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ । यस देशको अवस्थाको बारेमा हामीले गम्भीर चासो लिएका छौँ– विश्व खाद्य... थप पढ्नुहोस्
नेपालका दुई घटनाले चीन फेरि झस्कियो
काठमाडौं । केही समयअघि नेपालमा भएका दुईटा घटनाबाट चीन फेरि एकपटक झस्केको छ । नेपालले अपनाएको ‘एक चीन नीति’ लाई ठाडै आँच पु¥याउने कार्य सरकार मातहतको निकाय र जनप्रतिनिधिबाट हुन पुगेपछि चीन झस्केको हो । २०६६ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार राजधानीका सातवटा गुम्बाहरू फ्रि तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न हुनेगरेको र १० वटा गुम्बालाई नियमित अनुगमनमा राख्नुपर्ने बताइ... थप पढ्नुहोस्
उत्तर कोरियाको मालबाहक जहाज अमेरिकाको नियन्त्रणमा
एजेन्सी । अमेरिकाले उत्तर कोरियाको एक मालबाहक समुद्री कार्गो जहाज नियन्त्रणमा लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघनको आरोपमा अमेरिकाले कोइला बोक्न प्रयोग गरिँदै आएको वाइज अनेष्ट नाम दिइएको उत्तर कोरियाली समुद्री जहाज नियन्त्रणमा लिएको हो । अमेरिकी न्याय विभागले उत्तर कोरियाको समुद्री जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको उल्लंघन गरेकाले नियन्त्रणमा लिनुपरेको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोइला न... थप पढ्नुहोस्
सियोल । प्रतिकूल मौसमका कारण चरम खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएपछि उत्तर कोरियाले रेडक्रस समक्ष आपतकालीन सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियाले केही वर्षदेखि विषम खडेरीको सामना गर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१४ देखि २०१७ सम्मको खडेरीले उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको जनाइएको छ । गत वर्ष चलेको तातो हावा र ज्यादै कम वर्षादका कारण समस्य... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाए–इनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोन–अनसँग चौथो शिखर सम्मेलनका लागि तयारी शुरु भएको बताएका छन् । मूनले सोमबार वरिष्ट सरकारी अधिकारीहरुसँग नियमित छलफलको क्रममा उत्तर कोरियाली नेता किमसँग चौथो शिखर वार्ताका लागि तयारी शुरु भएको बताएका हुन् । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतीय कार्यालय ब्लू हाउसले उक्त जानकारी दिएको छ । यसअघि गत सेप्टेम्बरमा यी दुई नेताबीच तेस्रो ... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । उत्तर कोरियाका एक जना वरिष्ट अधिकारी उत्तर कोरियाका नेता कीम जोङ–अन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच हुने दोस्रो शिखर बैठकको तयारीका निम्ति शनिबार भियतनामको हनोई पुगेका छन् । दुबै नेताबीच यही फेब्रुअरीको २७ र २८ तारिखमा हनोईमा भेटवार्ता हुँदैछ । उत्तर कोरियाका प्रमुख सचिव कीम चाङ–सोनको नेतृत्वमा रहेको उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलमा एक दर्जन बढी उच्च अधिकारीहरु पनि रहेका छन् । भ... थप पढ्नुहोस्
बेइजिङ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन आज चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन् । उनको यो भ्रमणबारे यसअघि केही खुलाइएको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको यो भेटलाई किमको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग हुने गइरहेको अपेक्षित दोस्रो शिखर सम्मेलनको तयारीको रुपमा लिइएको छ । किम चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको चार दिनको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ लागेका छन् ।उत्तर कोरियाली नेता किम रेलमार्ग हुँदै चीन... थप पढ्नुहोस्